टेकुका डाक्टरको याचना, ‘एक लिटर भए पनि अक्सिजन ल्याउ, मान्छे कोल्याप्स हुन लाग्यो’ – Sapana Sanjal
May 16, 2021 189
Sapana Sanjal : नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । यस्तै मृतकको संख्या पनि घट्दो क्रममा रहेको छ भने निको हुने दर बढ्दै गएको देखिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएसँगै संक्रमण दर घट्दै गएको देखिएको हो । यस्तै मृतकको संख्या पनि घटेको छ ।
इमरजेन्सीमा मात्र होइन, प्यासेज र प्राङ्गणमा पनि बिरामी आईसीयू र भेन्टिलेटरको प्रतीक्षामा छन् । ‘एक जना बिरामीको आफन्तले त आफैँ २० लाख तिरेर भेन्टिलेटर किनेर ल्याउनुभो ’, डा. अनुप भन्छन्, ‘यहाँ सबै प्याक छ के गर्नु । आफ्नाे मान्छे बचाउन यहाँ के गरेका छैनन् ।’
‘हुनेले त भेन्टिलेटर किन्न सक्छन्, तर रिक्सा चलाउने मल्लिक दाइ जस्ताले के गर्ने ?’ आफैँले आफैँलाई प्रश्न गरेँ ।
टेकु अस्पतालका डाक्टर, नर्स र सहयोगी यताउता दौडधुप गर्छन् । एउटा बिरामी हेर्‍यो अर्को सिरियस हुन्छ । अर्कोलाई हेर्‍यो अर्को ढलिसक्छ । ‘तीन दिन भयो यति धेरै यस्तो भएको । के हुन लागेको हो ? कसरी मान्छेलाई बचाउने होला ? हिजो बेलुका मात्र ७ जना बिते’, अस्पतालका एक सहयोगी भन्दै थिए ।
आईसीयूकी एक नर्स चिच्याउँदै प्राङ्गणमा आइपुगिन्, ‘डा.साब सबै बिरामीको अक्सिजन लेभल एकै पटक घट्यो । गाह्रो भएको छ’, डाक्टरको टोली दौड्दै आईसीयूमा पुग्यो । डाक्टर-नर्स नै अक्सिजन सिलिण्डर बोकेर दौडिरहेका थिए । बिरामीका आफन्त भने भेन्टिलेटर खोज्न बजारतिर जाँदै थिए ।
‘हाम्रो हेल्थ सिस्टम खोई ? हे ! भगवान पूरै प्याक छ । अब आएका बिरामीलाई कहाँ राख्ने ?’ डा. अनुप र सूचना अधिकारी गौतम सल्लाह गर्दै थिए ।
आईसीयूबाट सन्देश आयो, ‘अघि आईसीयूमा सारेको दाइ रहनु भएन ।’ उनी रहेछन् तिनै डा. अनुपलाई अंगालो हाल्ने रिक्सा चालक मल्लिक दाइ । एक घण्टाको बीचमा तीन जनालाई टेकु अस्पतालले मृत घाेषणा गर्‍याे । रातको १२ बजेको थियो । मल्लिक दाइलाई गुमाएपछि डा. अनुप निरास हुँदै पीपीई सेटबाट बाहिरिए ।
दिनेश गौतमले सिला पत्रमा लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौ, प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८
Prevहिजो ‘भ्वाईस् अफ नेपाल’बाट बाहिरिएकी एलिनाको सबैलाई रुवाउने कथा । लेभर काम गरेर दिनको ७०० कमाउँछिन् (भिडियो हेर्नुस)